Access and communication needs | National Ethnic Disability Alliance: NEDA
ရယူရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ- ရယူရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များမှာ သင့်အကြောင်းကို သင် ပြောပြရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များကို
ရယူရန်၊ ကြားနာမှုကို တက်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် နှစ်သိမ့်အကြံပေးခြင်း
သို့မဟုတ် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုကို ရယူရန် အတွက် သင် လိုအပ်သည့် ပြန်လည်ချိန်ဆကိုက်ညှိမှု တစ်ခုခုတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ အကယ်၍ သင်သည် စကားမပြောနိုင်သူ သို့မဟုတ် သင့်တွင် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ ရှိလျှင် အွန်လိုင်း စကားပြော လွယ်ကူမှုများနှင့် အီးမေးလ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
نیازهای ارتباطی و دسترسی: نیازهای ارتباطی و دسترسی عبارتند از هرگونه هماهنگی و تسهیلات برای آنکه بتوانید داستان خود را تعریف کنید یا در دسترسی به اطلاعات، شرکت در جلسه دادگاه، دریافت مشاوره و حمایت احساسی به آن نیاز داشته باشید به عنوان مثال در صورتی که قادر به تکلم نباشید و یا نیازهای ارتباطی دیگری داشته باشید امکانات گفتگو و پست الکترونیک در دسترس شماست.
Luhnak le biakchawnhnak leiaherhmi pawl: Luhnak le biakchawnhnak leiaherhmi pawl cu na konglam chim ding, thawngthanhmi hmuhnak luh ding, biaceihmi ngaih ah kal ding asilole biaruahnak in thazaang peknak hmuh ding asilole thinlung umtu ning lei bawmhnak lei bawmh dingin na herhmi tawlrel piaknak pawl an si. Tahchunhnak ah,aholh kho lomi na si asilole biakchawnhnak lei ahadang herhmi na ngeih ahcun awnlai in ca ikuatnak (online chat) lei thilri pawl le imel (email) khaangah.
တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်- တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တခါလၢ်လၢ်နကလိၣ်ဘၣ်လၢကမၤစၢၤဒ်သိးနကနီၤဟ့ၣ်နဂ့ၢ်နကျိၤ,တၢ်ကမၤန့ၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ထီၣ်တၢ်ကနၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်မ့တမ့ၢ်မၤန့ၢ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးမ့တမ့ၢ်သးဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဒိန့ၣ်-ဖဲနမ့ၢ်တကတိၤတၢ်ဘၣ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအဂၤတဖၣ်,လီပှာ်ယဲၤအဖီခိၣ်တၢ်တဲသကိးအလီၢ်အကျဲတဖၣ်ဒီးအံမ့လ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.
Helitaanka iyo baahiyaha wada xiriirka: Helitaanka iyo baahiyaha wada xiriirka waa hagaajin kasta oo aad u baahan tahay si ay kaaga caawiso inaad la wadaagto sheekadaada, helitaanka macluumaadka, ka qeybgalka dhageysiga, ama aad hesho la-talin ama taageero niyadeed. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof aan hadli karin ama aad leedahay baahiyo kale oo hadalka ah, tas-hiilaadka lagu wada hadlo ee internetka iyo emaylka ayaa la heli karaa.
Mahitaji ya ufikiaji na ya mawasiliano: Mahitaji ya ufikiaji na ya mawasiliano ni marekebisho yoyote unayohitaji ili kukusaidia kushiriki hadithi yako, kupata habari, kuhudhuria kesi mahakamani, au kupata ushauri nasaha au usaidizi wa kihisia. Kwa mfano, ikiwa wewe una mahitaji ya kutokusema au una mahitaji mengine ya mawasiliano, vifaa vya mazungumzo ya mtandaoni na barua pepe zinapatikana.
அணுகுதல் மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கான தேவைகள்: அணுகுதல் மற்றும் தகவல் தொடர்புக்கான தேவைகள் என்பவை உங்கள் கதையைப் பகிர்ந்து கொள்ள, தகவல்களைப் பெற, வழக்கு விசாரணையில் கலந்துகொள்ள, அல்லது ஆலோசனை அல்லது உணர்வுபூர்வமான ஆதரவைப் பெற உதவிடும் வகையில் அமையும் உங்களுக்குத் தேவையான அனுசரிப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் வாய்மொழியில்லாமலோ அல்லது வேறுவிதமான தகவல் தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளைக் கொண்டவராகவோ இருந்தால், இணையவழி அரட்டை வசதிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்றவை கிடைக்கும்.